Nke a bụ Kirin 980 sitere na Huawei, nke mbụ 7nm SoC nke ụlọ ọrụ | Gam akporosis
Na nkọwa: nke a bụ Kirin 980, SoC nke Huawei's Mate 20 usoro
Mgbe emechara ya dika nke abụọ kacha mma-ere ngwaọrụ ika, Huawei na-enye ihe ị ga-ekwu maka ya. Oge a, isiokwu a ga-atụle maka Kirin 980, onye nhazi izizi nke ụlọ ọrụ ahụ arụpụtara na usoro 7nm.
Ekele diri Saịprọs, nke na-ahụ maka ikpughe otu Kirin 980 zuru ezu, ugbua AnandTech, ụlọ ọrụ ọzọ nke kpọrọ aha na ngalaba nke otu ihe a, anyị na-ama mara otú a chipset na sọrọ NPU bụ nke ahụ dị ugbu a na ulo oru ohuru agbarịta 20 nke ụlọ ọrụ. Nọgide na-agụ!
Dabere na data gọọmentị, ihe HiSilicon Kirin 980 SoC bụ naanị 74.13 mm². Akụkụ akaekpe aka ekpe nke SoC nwere Mali G76MP10 GPU. N'otu oge ahụ, mpempe akwụkwọ a na-ekwe nkwa 50% karịa arụmọrụ Mali-G72 MP12 dị na Kirin 970.
Kirin 980 bu onye mbu HiSilicon SoC iji were teknụzụ DynamicIQ nke ARM ohuru, nke na-eme ka o kwe omume iwulite chipsets na ọtụtụ atụmatụ. A na-ejikọta Quad-core Cortex A76 CPUs abụọ abụọ na DynamicIQ Shared Drive (DSU). Onyinye ya na-enye ọsọ ọsọ dị iche iche: abụọ na 2.6 GHz na abụọ na 1.92 GHz. Isi nke ọ bụla n'ime ha abụọ nwere nchekwa 2 KB L512.
N'akụkụ abụọ nke DSU bụ quad-core Cortex A55, nke nwere ike ịgba ọsọ ruo 1,8 GHz. A na-etinyekwa nchekwa 3 MB L4 na DSU. Ihe onyonyo dị n’elu na-egosikwa ọnọdụ ndị ọkwọ ụgbọala LPDDR4X RAM. Kirin 980 bụ SoC mbụ nke nwere ebe nchekwa RAM nke ugboro 2,133 MHz.
Ihe na-adọrọ mmasị banyere nhazi nke akụrụngwa a bụ na enweghị ike ịhụ ngalaba NPU abụọ ijikwa ọrụ ọgụgụ isi. Ọ kwesịrị ịnọ na mgbawa, mana enweghị ike ịmata ọnọdụ ya. Dabere na Huawei, Kirin 980's NPU ji okpukpu abụọ karịa nke Kirin 970.
N'oge na-adịbeghị anya ẹkenam smartphones, dị ka Nwunye 20, Nwunye 20 Pro, Nwunye 20X, Nwunye 20 RS Porsche Design na Sọpụrụ Ime Anwansi 2, ha na ndi oru na aru oru Kirin 980. Omume nke ekwentị 20 usoro nke usoro a na Chip dị ka nke a na-etinye ya n'ọnọdụ atọ mbụ nke ndepụta nke ekwentị kachasị ike nke AnTuTu site na Ọktọba afọ a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Huawei » Na nkọwa: nke a bụ Kirin 980, SoC nke Huawei's Mate 20 usoro